Qorshaha shidaal baarista Soomaaliya oo ay qeyb ka noqoneyso dowlada Masar - Caasimada Online
Home Warar Qorshaha shidaal baarista Soomaaliya oo ay qeyb ka noqoneyso dowlada Masar
Qorshaha shidaal baarista Soomaaliya oo ay qeyb ka noqoneyso dowlada Masar
Qaahira (Caasimada Online) – Soomaaliya waxa ay qorsheeneysaa in ay ku dhawaaqdo markii ugu horreeysay in ay Shidaal baaris ku qotoma xeerka caalamiga ah ay sameyso, waxa ayna Masar ka raadisay khibrad la xiriirta dhinacaas, sidaas waxaa sheegay Wasiirka Betroolka iyo macdanta ee Masar, Tariq el-Molla.
Fursadaha ah in shidaal laga helo Soomaaliya ayaa sare u kacay maadama ay leedahay xeebta ugu dheer Qaaradda Africa, ayuu wasiirka yiri Jimcihii.
Xilli uu shir la yeeshay wasiirka Betroolka iyo Macdanta Soomaaliya, Abdirashid Mohamed, el-Molla waxa uu sheegay in mas’uulka soo booqday ku nuux nuuxsaday in dalkiisa raadinayo in uu ka faa’ideysto khibradda Masar marka ay timaado dhinaca shidaal sahminta iyo sida lagu bixiyo qandaraasyada caalamiga ah.”
Wasiirka Masar waxa uu sheegay in Soomaaliya leedahay rejo ah in shidaal laga helo iyo sidoo kale in ay khibradda Masar ka faa’iddo.
Waxa uu ku celiyey in Masar ay door muhiim ah ka qaadan doonto horumarinta macdanta Soomaaliya taas oo kobcinta doonta qeybaha kale ee Soomaaliya.
Mollah waxa uu qiray in wadashaqeyntaas ay Soomaaliya ka faa’idi doonto maadama ay muddo dhaqaale burbur colaado sokeeye sababeen ku jirtay.
Wasiirka Masar waxa uu sheegay in uu dhiggiisa ka ogolaaday in kulammo dheeri ah ay ka wada galaan sidii loo horumarin lahaa dhinaca shidaalka iyo sahmintiisa.
Waxa uu ku nuux nuuxsaday sida ay Qaahira uga go’antahay in ay wadamada Qaaradda Africa uga gacan siiso kala shaqeynta meelaha ay danta ka wadaagaan bulshada Africa.